Gerardo Diego, nhaka yenhetembo yenhoroondo yeSpain | Zvazvino Zvinyorwa
Quote naGerardo Diego.
Gerardo Diego Cendoya anga ari mudetembi wechiSpanish uye munyori, achifungidzirwa semumwe wemitezo inomiririra yeanonzi Chizvarwa che27.. Mune rake basa rehunyanzvi, akatanhamara semupurofesa wemabhuku nemimhanzi. Kubata kwake kwepiano kwaive kwakanakisa. Pamwe pamwe nedzimwe nhengo dzambotaurwa dhizaini-yefilosofi kufamba, akatungamira mukugadzirwa kwechinyorwa chakakurumbira.
Saizvozvo, akatungamira "kuwanikwa patsva kwegongorism." Iyi yaive tsika yepamusoro-soro panguva yeSpanish Golden Age yaive nechinangwa chekusimudzira basa reGóngora. Kusvika kumagumo ehupenyu hwake, Basa rekunyora raDiego rakakudzwa neMuhoro weMiguel de Cervantes wa1979 (pamwe chete naJorge Luis Borges).
1.3 Shanduko yakanangana neavant-garde maitiro
1.4.1 Nekusimbiswa kwe gongorism
1.4.2 Nhetembo dzeSpanish
1.5 Pamberi nepashure pehondo yevagari vemo
1.5.2 Kuwirirana kwayo? kururamiswa
Akazvarwa muSantander, muna Gumiguru 3, 1896. Mukati memhuri yevatengesi vemachira, zvakamutendera kudzidziswa kwepfungwa kwakanaka. Saizvozvo, wechidiki Gerardo akakwanisa kugona mumhanzi dzidziso, piyano, kupenda uye makirasi emabhuku. Pamusoro pezvo, mutsoropodzi ane mukurumbira Narciso Alonso Cortés aive mumwe wevarayiridzi vake. Akaisa maari rudo rwetsamba.
KuUniversity yeDeusto akadzidza Philosophy uye Tsamba. Ikoko akasangana naJuan Larrea, waakatanga naye hushamwari hwakakosha pabasa rake rekunyora. Kunyangwe, doctorate yakazowanikwa kuYunivhesiti yeMadrid. Muimba iyoyo yezvidzidzo akawana chigaro cheLimi neMabhuku, chidzidzo chaakazodzidzisa munzvimbo dzakaita seSoria, Cantabria, Asturias neMadrid.
Nyaya Bhokisi raSekuru (1918) yaive yake yekutanga kunyora, yakaburitswa muna Pepanhau reMontañés. Zvakare, panguva iyoyo yakabatanidzwa nemhando dzakasiyana dzekudhinda. Pakati pavo, Grail Magazini, Castellana Magazini. Akanyorawo kune mamwe avant-garde magazini senge Greece, Reflector o Cervantes. Muguta guru reSpain akatanga kuenda kuathenaeum uye kuzvisimbisa nebasa rekutonga mukutanga kwema20.
Kudanana kweMwenga (1920) raive bhuku rake rekutanga renhetembo. Mune ino chinyorwa, pesvedzero yaJuan Ramón Jiménez uye kubatana kwake nenzira dzechinyakare zvinonzwisisika. Nekudaro, mushure mekugara kwenguva pfupi muParis, Gerardo Diego akatanga kusendamira kuma avant-garde maitiro. Izvi zvaive zvakabatana nekusika uye nziyo dzinonakidza dzemimhanzi.
Shanduko yakanangana neavant-garde maitiro
Guta guru reFrance rakaunza mudetembi kubva kuSantander padhuze necubism. Kubva pane chiitiko ichi akatanga kusanganisa madingindira maviri kana matatu mukati medetembo rimwe chetero. Panguva imwe, akabatanidza kugadzirwa kwemifananidzo mumabhuku ake enhetembo. Izvi zvinhu zvinobatika mumabhuku ake anotevera, Imagen (1922) uye Furo Manual (1924).
Pazasi pane chidimbu chenhetembo "Creationism" (kumagumo echitsauko chekutanga cha Imagen):
"Hamufunge here hama
kuti takagara makore mazhinji paSabata?
nekuti Mwari vakatipa zvese zvakaitwa.
Uye isu hapana chatakaita, nekuti nyika
zvirinani pane zvakaitwa naMwari.
Hama, ngatipfuurei nungo.
Ngatiteedzerei, ngatisikei Muvhuro wedu
Chipiri chedu neChitatu,
yedu China neChishanu.
… Ngatiitei yedu Genesi.
Ngatisimudzei nyika zvakare
Peji racho harina chinhu. "
Sekureva kwaRuiza and unto. (2004), iyo nzira kwayo yekuongorora basa raDiego iri "kuburikidza nekucherechedzwa kwenzira mbiri dzinoenderana," nhetembo izwi uye rwechipiri rwechokwadi mune inooneka chokwadi ".
Unogona kutenga bhuku pano: Ndima dzevanhu
Muna 1925 Gerardo Diego akaburitswa Ndima dzevanhu, muunganidzwa wenhetembo dzakaratidza shanduko mune rake basa rekunyora. Zvakanaka gore rimwe chetero iye akazivikanwa neNational Prize yeMabhuku (akagashira pamwechete naRafael Alberti). Uye zvakare, panguva iyoyo akagara kwenguva yakareba muGijon, maakatanga magazini Carmen y Lola, ese maviri avant-garde akachekwa.
Nekusimbiswa kwe gongorism
Munyori weCantabrian akatungamira, pamwe naAlberti, Pedro Salinas naMelchor Fernández Almagro, akateedzana edhisheni uye misangano yekurangarira pachiitiko cheGóngora Centennial. Iyi danho rakabatanidzwa nevanyori vechimiro chaDámaso Alonso, García Lorca, Bergamín, Gustavo Durán, Moreno Villa, Marichalar naJosé María Hinojosa.
Muna 1931 akaendeswa kuSantander Institute, pakutanga akange apa hurukuro uye hurukuro muArgentina neUruguay. Gore rakatevera rakazviratidza anthology iyo yakapa mukurumbira wakasarudzika kune vadetembi ve Chizvarwa che27: Nhetembo dzeSpanish: 1915 - 1931.
Iri bhuku rinosanganisirawo vanyori veSilver Age vakaita saMiguel de Unamuno naAntonio Machado. Kunyangwe yechipiri vhezheni (1934), Juan Ramón Jiménez akafunga kuzvibvisa. Chinyorwa chevanyanduri venguva ino varipo mune anthology chinosanganisira:
Pamberi nepashure pehondo yevagari vemo
Muna 1932, Diego akaburitsa muMexico Ngano yeEquis neZeda, chirahwe chine ngano uye gongorori. Gore rimwe chetero iye akatanga Nhetembo dzine chinangwa, iro basa rinoratidza baroque metric pateni - ine chaiwo chegumi nechitanhatu - kupa kuenderana kune avant-garde theme. Panguva imwecheteyo, mukati memakore pamberi pehondo yevagari vemo, munyori wechiSpanish akapa hurukuro kutenderera pasirese.
Muna 1934 akaroora Germaine Berthe Louise Marin, nyika yeFrance. Aive nemakore gumi nemaviri mudiki kwaari. Vaive nevana vatanhatu. Pakatanga hondo yevagari vemo, Diego aive muFrance, nehama dzemukadzi wake. Akadzokera kuSantander muna 1937, mushure mekukunda kwemauto aGeneral Francisco Franco.
Gerardo Diego akatora chinzvimbo chisina tsarukano achitsigira Francoist phalanx uye akaramba ari kuSpain panguva yehudzvanyiriri.. Naizvozvo, basa rake rekunyora harina kukanganiswa. Uyezve, mukati ma1940s akapinda muRoyal Academy (1947) uye akaburitsa akati wandei emabasa ake akajeka. Pakati pavo: Ngirozi dzeCompostela (1940), Lark chaiyo (1941) uye Mwedzi murenje (1949).
Nenzira imwecheteyo, akanyora zvinyorwa muvatsigiri vakasiyana venhau vehutongi, senge pepanhau Iyo New Spain kubva kuOviedo nemagazini Vertex, Block, Spanish y Tarisa. Kutsigira kwake Franco kwakarambwa nevazhinji vevamwe vake vezera, kunyanya paakaramba kutsigira kusunungurwa kwaMiguel Hernández.
Kuwirirana kwayo? kururamiswa
Pablo Neruda akatsoropodza zvakanyanya chinzvimbo chaDiego mune mamwe mavhesi ake General imba. Nekudaro, zvambotaurwa zvataurwa mune rake Autobiography: "Hondo ... haina kutitadzisa zvishoma kuti isu tichengetedze hushamwari hwedu, uye kunyangwe kuwedzera kwekuwedzera kwakanyanya munhetembo dzakabatana, nekuti vamwe vakatanga kuita runyorwa rwe nhetembo".
Gerardo Diego Cendoya aive nehupenyu hwakareba. Akafira muMadrid aine makore makumi mapfumbamwe, muna Chikunguru 8, 1987. Neichi chikonzero - kunyanya kubva panguva yepashure pehondo - yaive nenguva yekuwedzera huwandu hwayo hwezvinyorwa kusvika pamabhuku anodarika makumi mashanu. Vanenge vese ndeavo enhetembo genre, pakati peanonyanya kuzivikanwa ari:
Yakakwana biography (1953).
Nhetembo dzerudo (1965).
Dzokera kune mupilgrim (1967).
Hwaro hwekuda (1970).
Mavhesi matsvene (1971).
Pakupedzisira -ideologies parutivi— Nhaka huru yemunyori weSantander yakakosheswa muhupenyu hwake neMiguel de Cervantes Prize muna 1980. Uyu mubairo wakapihwa kwaari nenzira yakagovaniswa naJorge Luis Borges (ndiyo ndiyo yega chiitiko icho chaakapihwa nenzira iyi). Hazvishamise kuti simba raGerardo Diego paCantabrian uye nhetembo dzenyika dzichiri kushanda nanhasi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Biography » Gerardo diego